10 दिन Itinerary मा Bavaria जर्मनी | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 दिन Itinerary मा Bavaria जर्मनी
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 21/02/2020)
तपाईं बस जर्मनी Bavaria मार्फत एक यात्रा योजना सुरु गरेको छ भने, तपाईं शायद यात्रा बारे सोच रहे. तपाईं सम्भवत अचम्मको को सरासर नम्बर बढ्तै छन् ठाउँहरू भ्रमण गर्न. प्लस, तपाईं एक सबै तिनीहरूलाई फिट गर्न चाहनुहुन्छ 10 दिन Bavaria मा यात्रा.
Bavaria प्रस्ताव गर्न धेरै छ, र केही लागि हो. तपाईं Bavaria मा भव्य शहर को एक महान नम्बर भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै म्यूनिख, उदाहरणका लागि. तपाईं पनि अत्यन्तै मा जान सक्नुहुन्छ Bavarian बियर मार्ग तपाईं बियर को एक पारखी छन् भने.
हामी तपाईंलाई Bavaria लागि विस्तृत यात्रा दिनेछु, र सबै तपाईं के गर्न आवश्यक हुनेछ यसलाई पालना र एक अद्भुत समय छ! त्यसैले, हामीलाई हेरौं.
रेल परिवहन छ सबैभन्दा पर्यावरण मैत्री मार्ग यात्रा. thलेख द्वारा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको छ छ एक ट्रेन सेव, सस्ता ट्रेन टिकट वेबसाइट विश्व मा.
के तपाईं हामी हाम्रो साथ सुरू गर्नु अघि ठेगाना गर्ने आवश्यकता 10 दिन Itinerary मा Bavaria?
हामी सुरू गर्नु अघि, तपाईं जान्नु आवश्यक केही कुराहरू छन्.
Bavaria ठूलो प्रान्त हो, र तपाईं सजिलै यो हप्ता खर्च गर्न सक्छन्. तपाईं ठूलो विस्तार सबै हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो शायद आवश्यक छ.
तथापि, यदि तपाईं एक लागि जाँदैछन् 10 दिन यात्रा, त्यसपछि तपाईंले केही कुराहरू बाहिर कटौती हुनेछ. के थप छ, जाने यो सबै भन्दा राम्रो हुनेछ मार्फत रेल. के तपाईं त्यसो हो भने, तपाईं कुनै समय मा हरेक ठाउँमा प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ. कि माथि, तपाईं सबैभन्दा ठूलो दृश्य Bavaria प्रस्ताव साक्षी दिने मौका हुनेछ.
यसबाहेक, रेल द्वारा जाँदै मार्फत Bavaria धेरै सजिलो र सस्तो छ. टिकट सस्तो हो, र प्रान्त को हरेक कुना भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ.
अन्त मा, तपाईं Bavaria भ्रमण गर्न जब जान्नु आवश्यक. समय आफ्नो 10 दिन Bavaria मा अक्टोबर गर्न सेप्टेम्बर देखि कहीं यात्रा कवर गर्नुपर्छ छन्. तपाईं भीडलाई जोगिन हुनेछ, र तपाईं पनि यात्रा गर्न मौका प्राप्त हुनेछ Oktoberfest.
कि सबै ढाकिएको छ कि अब, हामीलाई आफ्नो यात्रा एक हेरौं:
Bavaria Itinerary दिन 1 र 2: म्यूनिख
Bavaria जाँदै गर्दा, तपाईं म्यूनिख सुरु गर्न. सबै भन्दा पहिले, यसलाई पुग्न सजिलो छ, जहाँ तपाईं युरोप मा हो कुनै फरक. तिमी सक्छौ एक रेल लिन लगभग कहीं र म्यूनिख पुग्न देखि. वा, यदि तपाईं टाढा कतै बाट आउँदै छन्, तिमी उड्न सक्छौ. म्यूनिख Bavaria मा सबै भन्दा ठूलो शहर हो, र विमानहरु विश्वभरिका धेरै शहर देखि यो उड. यदि छैन कि, तपाईं सजिलै अर्को प्रमुख शहर र त्यसपछि गर्न उडान गरेर पुग्न सक्दैन म्यूनिख जाँदै.
प्लस, हामीलाई कुनै पनि कि भूल छैन गरौं 10 Bavaria दिनहरुमा यात्रा हुन सक्दैन बिना म्यूनिख पूरा. तपाईं पक्कै यो शहर एक जादुई पाउनुहुनेछ यात्रा गर्न स्थान. को Englisher Garten गर्न आश्चर्यजनक घन्टाघर बाट, तपाईं यात्रा गर्न ठाउँहरू धेरै हुनेछ.
तपाईं सकेसम्म यसलाई धेरै रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी केन्द्र मा रहन तपाईंलाई सल्लाह. त्यो बाटो, तपाईं पैदल सबै प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ.
दिन को अन्तसम्ममा 2, तपाईं गर्नुपर्छ आफ्नो बैग प्याक र Berchtesgaden को शहर जाने.
3 र 4: Berchtesgaden र वरपरको राष्ट्रिय निकुञ्ज
Berchtesgaden Bavaria को दक्षिण पूर्व मा स्थित छ. यो अस्ट्रिया संग सिमाना मा भूमि को एउटा सानो खल्ती छ. तपाईं सबैभन्दा सुन्दर पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय निकुञ्ज यस क्षेत्रमा जर्मनी. प्लस, तपाईं पनि Berchtesgaden को जादुई शहर मा केहि समय खर्च गर्न प्राप्त हुनेछ.
अन्त मा, तपाईं लेक Konigsee र Eagles नेस्ट भ्रमण गर्न हुनेछ. ताल Konigsee जर्मनी मा उच्चतम ताल छ र भव्य पहाड घेरिएको छ. को Eagles नेस्ट लागि जाँदा, सबै इतिहास buffs यो भ्रमण प्रेम हुनेछ, यो नाजीहरूले को आदेश पोस्ट थियो.
तपाईं कुराहरू माथि मिश्रण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पनि सल्जबर्ग जाने सक्नुहुन्छ. शहर सीमा र Berchtesgaden नजिक छ, र यो सल्जबर्ग उत्तिकै जादुई!
तपाईं त Berchtesgaden मा खाने संग आफ्नो अद्भुत दिन अन्त्य. रात बिताएपछि, तपाईं दिनमा अर्को गन्तव्यमा मा सार्न सक्नुहुन्छ 5.
Berchtesgaden गर्न सल्जबर्ग
Berchtesgaden गर्न म्यूनिख
Berchtesgaden गर्न लिन्ज
Berchtesgaden गर्न नाइस
Bavaria Itinerary दिन 5, 6, र 7: Garmisch Partenkirchen, Zugspitze, र Neuschwanstein क्यासल
मा अर्को चरण आफ्नो 10 दिन Bavaria सबैभन्दा केही समावेश मा यात्रा ठाँउहरु जर्मनीमा. दिनमा एक पटक5सुरु, तपाईं गर्नुपर्छ Garmisch Partenkirchen एक रेल मा हप.
यहाँ तपाईं यस क्षेत्रमा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ के हो:
दिन 5: बसोबास र शहर को मुख्य भाग भ्रमण.
दिन 6: जादुई जाने neuschwanstein क्यासल. के तपाईं संसारको सबैभन्दा प्रतिष्ठित महल को रूपमा थाहा. यो एक प्रामाणिक कहानी महल र एक छ को डिज्नी महल प्रेरित.
दिन 7: Zugspitze को शिखर भ्रमण, जो शहर एकदम नजिक छ. यहाँ तपाईँले आल्प्स को सबै भन्दा राम्रो दृश्य को एक प्राप्त गर्न सक्छन्. केही मानिसहरू पदयात्रा, तर हामी तपाईँलाई केबल कार लिन सल्लाह.
यो तपाईंको यात्रा को सबैभन्दा लामो भाग र बुट गर्न एक महत्वपूर्ण एक हुनेछ. दिनमा 8, तिमी सक्छौ Rothenburg गर्ने सार्न.
अलम फुसेन गाडिहरु गर्न
म्यूनिख फुसेन गाडिहरु गर्न
श्टुटगार्ट फुसेन गाडिहरु गर्न
नूर्नबर्ग फुसेन गाडिहरु गर्न
8: Rothenburg Itinerary मा Bavaria
दिन 8 एक लागि आरक्षित छ लामो रेल सवारी र को रंगीन सहरमा Rothenburg ओब der Tauber. सवारी लामो छ भन्ने चिन्ता छैन, तपाईं यो सुरम्य शहर भ्रमण गर्न समय प्रशस्त हुनेछ. यो धेरै सानो छ, र तपाईं एक दिउँसो यसलाई हेर्न सक्छन्.
दिन को अन्तसम्ममा, तपाईं Schneeballen मा भोजन गर्न सक्छन्. यदि तपाईँ चाहानु हुन्छ भने, तपाईं रात रहन सक्छ, वा तपाईंले अर्को गन्तव्यमा मा सार्न सक्नुहुन्छ: नूर्नबर्ग वा अर्जबर्ग.
Bavaria Itinerary दिन9र 10: नूर्नबर्ग अथवा अर्जबर्ग
नूर्नबर्ग Bavaria को प्रान्तमा दोस्रो ठूलो शहर हो. यो पनि एक मा स्थान भ्रमण गर्नु पर्छ आफ्नो 10 दिन Bavaria मा यात्रा. तथापि, यदि तपाईँ चाहानु हुन्छ भने, तपाईं सधैं अर्जबर्ग यसलाई स्विच गर्न सक्नुहुन्छ. दुवै शहर प्रत्येक अन्य र Rothenburg गर्न अपेक्षाकृत नजिक छन्, त्यसैले यात्रा भाग सजिलो हुनेछ.
दुवै शहर जादुई र मध्यकालीन इतिहास र महल भरिएको हो. त्यसैले, यो साँच्चै जो थप एक रोचक छ निर्णय गर्न सम्म छ.
तपाईं लगभग दुई पूर्ण दिन हुनेछ रूपमा, तपाईं पनि दुवै भ्रमण गर्न सक्षम हुन सक्छ.
त्यसैले, त्यहाँ छ. आफ्नो 10 दिन Bavaria मा यात्रा, जर्मनी. हामी युरोप को यो भव्य क्षेत्रमा हरेक महत्त्वपूर्ण स्टप समावेश गर्न पक्का गरे. हामी पनि कसरी साँच्चै रेल तिनीहरूलाई सबै पुग्न यो प्रस्ताव छ सबै जादु अनुभव समावेश छन्.
तपाईं बारेमा Itinerary मा Bavaria थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, स्वतन्त्र महसुस सम्पर्क एक ट्रेन सुरक्षित.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “एक 10 दिन Itinerary मा Bavaria जर्मनी” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fitinerary-bavaria-germany%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
Bavaria यूरोपेन्ट्रावेल europetravel eurotrip trainjourney Tranride travelgermany traveltips